चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु
काठमाडौँ, साउन १४ गते । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेस गर्नुभएको विचार गरियोस् प्रस्तावलाई सदनले अनुमोदन गरेको हो । संशोधनका लागि अनुमोदन भएसँगै अब विधेयकका प्रावधानमा सांसद्हरूले संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौतालाई मूल विधेयकमा अंश बन्ने गरी समितिमार्फत् औपचारिक रूपमा संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अब अगाडि बढ्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार सांसद्हरुले ७२ घन्टाभित्र संशोधन दर्ता गर्नुपर्छ ।
त्यसअघि विधेयकको सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विधेयक पारितको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै अब सहज रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सैद्धान्तिक छलफलमा व्यक्त धारणालाई संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विश्वास सांसद्हरूलाई दिलाउनुभयो ।
लामो समयसम्मको अवरोधपछि शुक्रबारको बैठकमा विधेयक पेस भएको हो । पेस भएको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि आइतबार संशोधनका लागि बहुमतले विधेयक अनुमोदन गरेको हो ।
संशोधनका लागि अनुमोदन भएको विधेयक यसअघि डा. केसीसँग भएको सम्झौताभन्दा केही फरक भने छ । दश वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने व्यवस्था विधेयकमा छैन ।
यस्तै, एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको थियो । विहीबार सरकार र डा. केसीबीच भने दुबै विषय बन्देज हुने गरी सहमति भएका छन् । यद्यपि सरकारले भने मूल विधेयकमा पनि प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अधिकार दिने गरी विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिँदै आएको थियो ।
केसीसँग भएका सम्झौताका विषय पनि संशोधनको चरणमा पेस हुनेछन् । यस्तै अन्य सांसदहरूले पनि विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन् । विधेयकका सम्पूर्ण दफाहरू संशोधनका लागि खुला हुनेछ ।
संशोधन दर्तापछि विधेयक पुनः सदनमा पेस हुनेछ । सदनमा पेस भएपछि पूर्ण बैठकले विधेयकमाथि संसद् वा समितिमा दफाबार छलफल गराउन सक्नेछ । अहिले समिति गठन नभएको अवस्थामा पूर्ण बैठकमा नै दफाबार छलफल हुनसक्नेछ । दफाबार छलफल भई पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस हुने प्रक्रिया रहेको छ ।